‘पढ्न दिने, सर्टिफिकेट दिने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’
विनय ज्याेती शुक्रवार, भदौ ६, २०७६, ००:४९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचबिसी)ले एमएस्सी र बिएस्सी माइक्रोबायोलोजीस्टलाई लाईसेन्स नदिएको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको छ । मेडिकल, ल्याब, खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका क्षेत्रमा अत्यावश्यक माइक्रोबायोलोजिस्टहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलेको हो ।
यसै सन्दर्भमा माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समितिका अध्यक्ष संजिव धितालसँग जनतापाटीका लागि विनय ज्योती सापकोटाले कुराकानी गरेका छन :
माइक्रोलोजी संघर्ष समितिले हाल गरिरहेको आन्दोलन कस्तो प्रकारको आन्दोलन हो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय (आइओएसटी) संकायसहरु छन् । आईओएममा पढेका मेडिकल माइक्रोबायोलोजीस्टहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी)ले लाइसेन्स जारी गरिरहेको छ तर आइओएसटी तर्फका विद्यार्थीहरुले पनि त्यही कोर्स ‘मेडिकल माइक्रोबायोलोजी’ नै पढ्छन तर यी विद्यार्थीहरुलाई अहिले लाईसेन्सबाट बन्चित गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन लाइसेन्सबाट बन्चित गरिएकालाई लाइसेन्स दिलाउनेतिर केन्द्रित छ ।
किन तपाईहरुले आन्दोलननै गर्नु पर्‍यो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट जारी गरिने लाइसेन्स लिन अनिवार्य छ । त्यो लाइसेन्स विना कुनै पनि स्वस्थ्य क्षेत्रको काम गर्न पाइँदैन । एउटै विश्वविद्यालयको फरक संकायमा त्यही बिषय पढेकाहरुलाई समान व्यवहार नभएको हुनाले हामीले लाइसेन्स लिनबाट बञ्चित भएका छौं । यसो हुदाँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनौं । हामीले समान अधिकार पाउँ, काम गर्न पाउँ भनेर आन्दालननै गर्नु पर्‍यो ।
यो आन्दोलन कहिले सम्म चल्छ ? यो केहीदिनको राजनीति मात्र हो की के हो ?
आन्दोलनको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भने यसको समयावधि भन्ने हुँदैन । जुनदिन सम्म हामीले लाइसेन्स प्राप्त गर्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामी थाक्नेछैनौँ । भाद्र २ गते एनएचपिसीले हामीसँग १५ दिनभित्र हाम्रो मागलाई संबोधन गर्छौ भनेर सहमति गरेको छ । सहमती अनुसार एनएचपिसीले काम नगरेमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।
अन्य राजनीतिक दल तथा उनिहरुका भातृ संगठनबाट के–कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?
नेकपा निकट अनेरास्ववियूका संयोजक र सहसंयोजकलाई यो आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुले पूर्ण समर्थन गर्नुभएको छ । त्यस्तै विघठन भैसकेको काँग्रेस निकट नेविसंघका निवर्तमान महामन्त्री र उपाध्यक्षसँग कुरा गर्दा आन्दोलनका विषयमा सकारात्मक रेस्पोन्स दिनुभएको छ । त्यस्तै समाजवादी विद्यार्थी संघ र राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले पनि हाम्रो आन्दोलनलनई समर्थन गर्ने कुरा गनुस्भएको छ ।
तपाईहरुको आन्दोलनप्रति प्राध्यापकहरुको कस्तो दृष्टिकोण रहेको छ ?
प्राध्यापक सर–म्याडमहरुमाको कुरा गर्दा, पहिला उहाँहरुमा पनि केही कन्फ्युजन थिए । तर अहिले त्यो कन्फ्युजन हटिसकेको छ । उहाँहरु यस बिषयमा अहिले एकठाउँमा उभिनु भएको छ । हाम्रो आन्दोलनप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
तपाइँहरुले उठाइरहनु भएको विषय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । तर, अहिले दक्षता हाँसिल नगरेका मानिसले समेत फार्मेसी संचालन गरिरहेको पाइन्छ । तपाईहरु सबैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकरात्मक असर पार्दैन ?
विदेशतिर हेरौ एउटा मानिस विरामी भएर अस्पताल जान्छ उसलाई डाक्टरले सिधैं औषधि सिफारिस गर्दैन, माइक्रोबायोलोजिस्टले सुझावको आधारमा मात्र औषधि चलाउने गर्छ । त्यो प्रणाली नेपालमा छैन । माइक्रोबायोलोजिस्टलको काम नै अज्ञात रोगहरुको पहिचान गर्ने, त्यसमा चलाइने एन्टीबायोटिकहरु डाक्टरलाई प्रिस्क्राइब्ड गर्ने हो । मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेकालाई लाइसेन्स दिदा, काम दिदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकरात्मक असर होइन झन ब्यवस्थीत र गुणस्तरयुत्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।
मानिसले राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्ने परिपाटी छ । तपाइँहरुको आन्दोलन पनि राजनीति तिर नै अभिप्रेरित हो ?
राजनीतिक स्वर्थतिर अभिप्रेरित भन्दा पनि २ हजार ५ सयको संख्यामा अहिले स्नातकोत्तर एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थी र २५ हजार स्नातक पास गरेका विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो । यसबाट राजनीति गर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकार बनाइएको छ, शिक्षित बेरोजगार बनाइएको छ हामी त्यसको अन्त्यको लागि लागिरहेको छौं । राजनीतिक स्वार्थसँग यो जोडिएको छैन ।
पाठ्यक्रममा पनि विवाद छ भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
एनएचपीसीले भने अनुसारनै पाठ्यक्रम परिवर्तन हुदै आएको छ । उहाँहरुले भने अनुसार पटक पटक पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ । उहाँहरुले ६ महिनाको इन्टर्नसिप गराउनुपर्छ भन्नुभो त्यो लागु भएको छ । पछि थेसिसको कुरा आयो त्यो पनि लागु भयो । हामीहरुले एनएचपीसीले भने अनुसार सबै मानेका छौं तर हामी हाम्रो लाइसेन्स पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छौं ।
पहिले २०६७/६८ सालमा पनि यो आन्दोलन चलेको थियो त्यसपछि केहीले लाइसेन्स पनि पाए । तर अर्कोसालदेखि पुन बन्द भयो । त्यसपछिको समयमा आन्दोलन किन निदायो ?
यो कस्तो भयो भने, माइक्रोबायोलोजीको आन्दोलन जुन रुपमा अगाडि बढ्यो त्यसपछि मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरुलाई ‘जनस्वास्थ्य प्रयोगसालाबाट लाइसेन्स प्रदान गर्नु’ भनेर सिफारिस भयो । त्यो सिफारिसको आधारमा फेरी एनएचपिसीले पत्र लेख्यो । अनि अन्तिममा त्यही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले एनएचपिसीलाई लाइसेन्स जारी गर्नु भनेर परिपत्र गर्यो । र एनएचपिसीले अस्थायी लाइसेन्स जारी गरेको थियो । अस्थायी लाइसेन्स जारी गरेको १ सय १६ जनालाई हो र उनीहरुको हातमा अहिले पनि त्यही अस्थायी लाइसेन्स छ । अस्थायीलाई वैधानिकरुमा स्थायीमा लैजान स्वतः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो तर तत्कालिन एनएचपिसीका अध्यक्ष श्रवणकुमार मिश्र यो विषयमा पूर्वाग्रही हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै मौखिक आदेशको आधारमा यो लाइसेन्स प्रकृया बन्द भयो ।
त्यसपछि बिचमा हामीले आन्दोलनको उठान गर्यौं, प्रदर्शनको क्रममा हाम्रो ८६ जना साथीहरु गिरफ्तार पर्नुभयो । झण्डै ६० जना साथीहरु घाइते हुनुभयो । २७ दिनसम्म तालाबन्दी पनि भयो । संयुक्त कार्यदल बन्यो । प्रतिवेदन पेस भयो । तर हाम्रो आन्दोलनमा पूर्वाग्राह राख्ने सरहरु जो एनएचपिसी बाट कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले अन्त्यमा साइन गर्न मान्नु भएन र हाम्रो आन्दोलन उपलब्धी बिहिन भयो ।
व्यक्तिगत रुपमा तपाइँलाई यो आन्दोलन कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?
मैले ६८ सालमा स्नातक पास गरें ६९ मा एमएस्सी जोइन गरेर ७१ मा एसएस्सी माइक्रोबायोलोजी सकेको हो । अब माइक्रोबायोलोजिस्टकै रुपमा काम गर्ने अवसर पाएँ भने मेरो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही योगदान रहन्छकी भन्ने लागेको छ ।
तपाइँ भर्खरै अध्यक्ष्य बन्नु भएको छ । त्यसैले यो आन्दोलन त्यै पद पाउँदाको रौनक मात्र हो की काम पनि गर्नुहुन्छ ?
नेपाली एक उखानै छ ‘नयाँ जोेगीले धेरै खरानी घस्छ’ तर त्यो नभइकन यो मुद्दामा खरानी घस्नुपर्ने कारण छैन । विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिने प्रकृयामै लैजाँदा र यो मुद्दा संबोधन हुँदाखेरी समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई योगदान पुग्ने हुनाले यो क्षणिक आन्दोलन होइन । यसलाई निर्णयक बनाउन तर्फ हाम्रो कदम अगाडि बढ्नेछ ।
अहिले हामी आन्दोलनको फेजमै छौं । सपना नदेखिकन सपना पूरा हुँदैन, यो आन्दोल हामी टुंग्याएरै छोड्छौं । हाम्रो विषयमा पनि सुधार्नुपर्ने कुरा सुधारेर लाइसेन्स लिने प्रकृयामा अगाडि बढ्छौं ।
राजपा र समाजवादी पार्टीको चुनावी गठबन्धन ! सम्भावना कति ? यता राजपाका महासचिव केशव झाले भने नेपाली कांग्रससँग पनि गठबन्धनको तयारी रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘समाजवादीसँग एकताको कुरा त होलानै सँगसँगै कांग्रेससँग पनि एकताको कुरा बढ्नसक्छ । पहिला कांग्रेले निर्णय गरोस उनीहरुको निर्णय आएपछि मात्र समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने कुरा छ ।’ बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६, १५:१९:००
‘जेल हाले पनि असारमा कर तिर्न सकिदैँन’